Lane dheeraad ah oo loogu talagalay Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli ayaa ku jira Adeegga Maanta RayHaber | raillynews
HomeGUUDKantaroolka dheeraadka ah ee Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli waa Adeeg Maanta
14 / 08 / 2018 GUUD, WADADA, Headline, TURKEY
Degmada Kobanheegan, D-100 ee Adnan Menderes iyo Turgut Ozal oo ka gudbay dhinaca magaalada Ankara ayaa loo dhameeyay hawsha gaadiidka dadweynaha oo dhamaystiray waddada dheeraadka ah. 14 Laynka dheeriga ah, oo ka bilaabi doona Talaadada Talaadada Talaadada (Talaado) Talaadada (Agoosto), waxaa loo isticmaali doonaa gaadiidka dadweynaha. Gaadiidka dadweynaha ayaa la furi doonaa laynka cusub ee la joojiyo rakaabka dhulka iyo rakaabka. Sidaa awgeed, gawaarida gawaarida D-100 waa la dhimi doonaa.
SADDEXAAD LAYDIYO KALA DOORANO LABAAD
Metropolitan Municipality si loo yareeyo khidmadda taraafikada ee magaalada dhexdeeda gudaheeda shaqadeeda ayaa lagu dhajiyay laynka dheeriga ah ee kunka mitir. Wadarta hal kun oo 500 ah oo asfalt ah ayaa la dhigay qaybta wadada. Shaqooyinka xudduudaha iyo xayawaanka ayaa sidoo kale lagu sameeyay waddada. Mashruuca u dhexeeya Adnan Menderes Pedestrian Pedestrian Overpass iyo Turgut Özal Pedestrian Overpass, D-100 Ankara oo u dhaxaysa labada buundo ee lugta ayaa laga saaray laba huteel ilaa saddex haad.
DAKHLIGA WAXAY LAHAYDO
Thanks to lane cusub, oo kaliya ay isticmaali doonaan gaadiidka dadweynaha iyo gawaarida adeegga, cufnaanta joogsiga gaadiidka dadweynaha ayaa laga hortagayaa. Iyadoo laynka cusub lagu darayo, joogsiyada ayaa isbeddelaya. Jadwalka Dadweynaha Evi wuxuu ka soo horjeedaa saldhigga ISU (Gendarmerie Lodging) iyo Turgut Ozal Overpass oo ku yaal meel ka baxsan Xarunta Ganacsiga ee Ekşi. Dhinaca kale, waxaa jira nidaam dheeri ah oo loogu talagalay dadka waayeelka ah iyo dadka curyaamiinta ah si ay u istcimaalaan joogsiyada Buuraleyda Mimar Sinan Pedestrian Bridge ee waddada.
Turkey ee cable baabuur ugu horeeyay ee gaadiidka dadweynaha ee March
Gaadiidka dadweynaha ee ugu horreeya ee adeega bisha March
Mimar Sinan Baaskiillada
Ogeysiis Qandaraasle ah: Dakhliga Shokorka DMU ee 15000
Geedaha Centenary ee İzmir
Cunaqabatayn culus ee gaadiidka dadweynaha ee Ankara